दशैंमा शाकाहारीले के खाने ?::Online News Portal from State No. 4
काठमाडौं ३१ असोज– दशैं भन्नासाथ पछिल्लो समय खानपान, मनोरञ्जनको चाडको रुपमा विकसित भइरहेको छ । देवी भगवतीको पूजा अर्चना उपासनामा मानिसहरुको रुचीमा कमी देखिएको छ । सांस्कृतिक रुपमा पनि दशैं नयाँ लुगा, शक्तिपीठहरुमा बलीको रुपमा लिइने गरेको छ ।
दशैं मान्ने धेरै नेपालीको चुलामा मासुका परिकार पाक्ने गरेको छ । तर पछिल्लो समय अहिंसावादी सोच, स्वास्थ्यमा मासुले पार्ने नकारात्मक प्रभाव आदी कारणले पनि मासु नखाने मानिसहरुको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । दशैंमा सरकारी स्तरमा भेडा च्यांग्राको विक्री हुने गरेको छ । मासुका विभिन्न परिकरहरुको चर्चाका बीच हरियो तरकारी, काउली, साग, च्याउआदीको कुनै चर्चा हुने गरेको छैन ।‘दशैंमा मासु नखाए के खाने ?’ भन्ने प्रश्नको सामना अधिकांश शाकाहारीले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । जस कारण शाकाहारीहरु दशैंमा के खाने भन्ने द्विविधामा पर्ने गरेका छन् ।
मासुको प्रयोग नगरि पनि दशैंलाई खानपानका हिसावमा स्वादीलो बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि तपाईले नियमित रुपमा खाने काउली, घिरौला, बन्दा, भन्टा, साग, मूलाका साथसाथै पनिर, च्याउका विभिन्न स्वादिलो परिकार बनाउँन सक्नु हुन्छ ।दशैंमा तपाईले मटर पनिर, पालक पनिर, तोफु, मटर मसरुम पनिर, लगातयको तरकारी बनाउन सक्नुहुन्छ ।
शाकाहारीले दशैंको समयमा चना, केराउ, बोडीको तरकारीहरुको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । त्यस्तै आलुको अचार, काक्राको पुरानो अचारको प्रयोग पनि भेजहरुले गर्न सक्नुहुन्छ । मासुलाई धेरैदिनसम्म राखेर पकाएर खानु भन्दा तपाईको भान्सामा पाकेको पालक पनिर, च्याउको परिकार निकै स्वास्थकर हुन्छ । दशैंमा खिर लगायतका परिकार पनि बनाउन सकिन्छ ।
दहीको प्रयोग दशैंमा धेरै हुने गरेको छ । दही, चिउरासँग आलूको अचार कम्ति स्वादीलो हुँदैन । जे जस्तो परिकार भएपनि दशैंमा सन्तुलित र आफ्नो शरीर स्वास्थ्यका हिसावले खानपान गरेर दशैं मनाउनु होला ।
रेडक्रस दिवसमा रक्तदान शिविर